The Land and Revenue Act India Act 2,1876, Vol. III စိုက်/မွေး/ဆည်၊ စည်ပင်
The Upper Myanmar Land and Revenue Regulation (Reg.3, 1889, Vol. III) စိုက်/မွေး/ဆည်၊ စည်ပင်
The Lower Myanmar Town and Village Land Act (India Act 4, 1898, Vol. X) စိုက်/မွေး/ဆည်၊ စည်ပင်
The District Cesses Act (India Act 2, 1889, Vol. III)
The Revenue Recovery Act (India Act 1, 1890, Vol. III) ဘဏ္ဍာရေး
The Land Acquisition Act (India Act 1, 1894, Vol. XI) ဘဏ္ဍာရေး
The State Grants Act (India Act 15, 1895, Vol. 10) ဆောက်လုပ်ရေး၊ စည်ပင်
The Arms Act (India Act II, 1878, Vol. II)
The Arms (Temporary Amendment ) Act(51, 1951)
လက်နက်(အရေးပေါ်ပြစ်ဒဏ်စီရင်မှု) (ယာယီ) အက်ဥပဒေ (ဥပဒေ အမှတ် ၃၁/၁၉၄၉)
The Explosives Substances Act (India Act 6, 1908, Vol. II)
The Prisons Act (India Act 9, 1894, Vol. I)
The Prisoner Act (India Act 3,1900,Vol.I)
The Identification of Prisoners Act (India Act 33, 1920, Vol. I)
The Yangon Police Act (India Act 4, 1899, Vol. I)
The Police Act,1945 (6,1945)
The Myanmar Extradition Act (India Act 15, 1903, Vol. I)
The Unlawful Associations Act (India Act 4, 1908, Vol. II)
The Myanmar Excise Act (India Act 5, 1917, Vol. III)
The Myanmar Passport Act (India Act 34, 1920, Vol. I) အလုပ်သမား
The Myanmar Official Secrets Act (19, 1923)
The Public Order (Preservation) Act (Myanmar Act 16, 1947, Vol. II)
The Public Property Protection Act (83,1947)
ပြည့်တန်ဆာနှိပ်ကွပ်ရေးအက်ဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၂၄ / ၁၉၄၉) လူ/ကယ်/ပြန်
အရေးပေါ်စီမံမှုအက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ်၁၇/၁၉၅၀) ရုပ်သိမ်းပြီး
၁၉၅၁ခုနှစ်၊ရာဇဝတ်ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေ(ဥပဒေအမှတ် ၁၉/ ၁၉၅၁ ခုနှစ်၊ အတွဲ-၈) တရားလွှတ်တော်ချုပ်
အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့်အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ဌာန အက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၅၀ / ၁၉၅၁)
နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်များ(ဆင်ယင်ပြသမှုကန့်သတ်ရေးအက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၄၇ / ၁၉၅၄) ပြန်ကြားရေး
၁၉၅၉ခုနှစ်၊ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး အက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၃၉/၁၉၅၉)
၁၉၆၀ပြည့်နှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၈/၁၉၆၀)
၁၉၆၁ခုနှစ်၊ ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်သူများခြေချုပ်နှင့်ခံဝန်အက်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၁၂ / ၁၉၆၁) တရားလွှတ်တော်ချုပ်
၁၉၆၃ခုနှစ်၊အများနှင့်သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၁ / ၁၉၆၃)
ကျွဲနွားတိရစ္ဆာန်ကျော်နင်းမှုဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၁၁ / ၁၉၈၅ ခုနှစ်)
တရားမဝင်သောနည်းလမ်းဖြင့်ရရှိသည့် ပစ္စည်းများ ပိုင်ဆိုင် ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ခြင်းကို အရေးယူသည့်ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၃ / ၁၉၈၆ခုနှစ်)
လောင်းကစားဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ်၆ /၁၉၈၆ ခုနှစ်)
မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သောပစ္စည်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုကန့်သတ်သည့် ဥပဒေ (ဥပဒေအမှတ် ၁ / ၁၉၈၇ ခုနှစ်)
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေသောဆေးဝါးများဆိုင်ရာ ဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၁ / ၁၉၉၃) ကျန်းမာရေး၊ လူ/ကယ်/ပြန်
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ (ဥပဒေ အမှတ် ၄/၁၉၉၅)
ပြစ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် နိုင်ငံအချင်းချင်း အကူအညီပေးရေး ဥပဒေ(နယကဥပဒေအမှတ်၄/၂၀၀၄) နိုင်ငံခြားရေး၊ တရားလွှတ်တော်ချုပ်၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး
လူကုန်ကူးမှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေ(နယကဥပဒေအမှတ် ၅/ ၂၀၀၅) လူ/ကယ်/ပြန်၊ အလုပ်သမား၊ ရှေ့နေချုပ်ရုံး
နိုင်ငံတော်အလံဥပဒေ (နယကဥပဒေအမှတ် ၈ /၂၀၁၀)
နိုင်ငံတော်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ (နယကဥပဒေအမှတ် ၉ / ၂၀၁၀)
နိုင်ငံတော်သီချင်းဥပဒေ (နယကဥပဒေအမှတ် ၁၀ /၂၀၁၀)
ငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခွင့်နှင့်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ (ပထစဥပဒေအမှတ် ၁၅ /၂၀၁၁)
ရပ်ကွက် သို့မဟုတ် ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေ (ပထစ ဥပဒေ အမှတ် ၁ /၂၀၁၂)
ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ(ပထစဥပဒေအမှတ်၁၁/ ၂၀၁၄) ဘဏ္ဍာရေး
အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (ပထစဥပဒေအမှတ်၂၃ / ၂၀၁၄) ပို့ဆက်
အသင်းအဖွဲ့များမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ (ပထစဥပဒေအမှတ် ၃၁ /၂၀၁၄)
မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဥပဒေတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ(ပထစဥပဒေအမှတ် ၁၁ /၂၀၁၅)
နိုင်ငံတော်သမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ၏လုံခြုံရေးဆိုင်ရာဥပဒေ (ပထစဥပဒေအမှတ် ၂၅ /၂၀၁၆)